Mogadishu Journal » Madaxweyne Xassan Sheekh” horaanta September waxaan qaban doonaa shirweyne Qaran
Mjournal : — Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xassan Sheekh Max’uud ayaa ku dhawaaqay horaanta bisha September magaalada Muqdisho lagu qaban doono shirweyne Qaran oo ay ka soo qeyb-galli doonaan dhamaan qeybaha bulshada.
Waxaa uu sheegay madaxweyne Xassan Sheekh shirkaas lagu casuumay labo boqol oo ruux kuwaas oo ka kala imaanaya qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha dalka iyo dibada intaba, isaga oo sheegay in shirkaa uu si rasmi ah uga furmi doono magaalada Muqdisho 2-da bisha September.
”Shirkaa waxaa u argnaa in uu noqon doono mid wax weyn ka badala siyaasada murugsan ee Soomaaliya, rajo badan ayaa ka qabaa in shirkaa ugu danbeytii ka soo bixi doonaan go’aamo wax weyn ka tiri doona aayaha mustaqbalka Soomaaliya,” ayuu yiri madaxweyna Xassan Sheekh Max’uud.
Waxaa uu madaxweyne Xassan Sheekh baaq u dirray shaqsiyaadka dhaliilsan siyaasadda dowladda uu hogaaminayo, wuxuuna ku baaqay in la joojiyo dacaayadaha aan salka lahayn ee laga fidiyo dowladda.
Madaxweyne Xassan Sheekh Max’uud ayaa kula dardaarmay guud ahaan bulshada Soomaaliyeed in ay u guntadaan sidii dalka looga saari lahaa dhibaatada dabada dheeraatay ee uu ku soo jiray 23-kii sano ee u danbeeyay.
Madaxweyne Xassan Sheekh Max’uud ayaa sheegay in dowladdiisa xoogga saari doonto dib u hishiisiinta iyo sidii leysugu soo dhaweyn lahaa qeybaha bulshada Soomaalida.